Ny vahaolana amin'ny olana mahazatra amin'ny fitaovana fitrandrahana ultrasonic
Fitaovana fitrandrahana ultrasonic no votoatin'ny fanafody sinoa nongotana, noho ny asany maro, ny fahombiazana tsara, ny firafitra tsara, ny fanodinana tena tsara, no nampiasaina betsaka tamin'ny sehatra rehetra amin'ny fitrandrahana zava-mahadomelina sy fifantohana. Androany, hampahafantarinay ny korontana iraisana ...
Fitaovana vaovao an'ny fitaovana ultrasonic amin'ny indostrian'ny slurry
Ireo fitaovana novokarin'i Hangzhou Precision Machines Co., Ltd. dia natao hanatsarana ny fizotry ny famokarana reactor lehibe. Satria lehibe loatra ny tanky na ny fizotran'ny tanky dia tsy afaka manampy mivantana fitaovana ultrasonic ao anaty tanky, ny slurry ao anaty tanky lehibe dia hikoriana amin'ny ...
Fampidirana ny firafitra sy ny firafitry ny fanaparitahana ultrasonic sy ny raharaha mila fiheverana ampiasaina
Ny onjam-peo ultrasonic dia karazana onja mekanika izay avo kokoa noho ny an'ny onjampeo ny onjampeo. Izy io dia novokarin'ny vibration of transducer eo ambanin'ny fientanam-po malefaka. Izy io dia manana ny mampiavaka ny haavo matetika, ny halavan'ny halavan'ny fohy, ny fisehoan-javatra kely diffraction, indrindra ny ...
Fampiharana fitaovana emulsification ultrasonic
Amin'ny indostria samihafa, miovaova be ny dingan'ny famokarana emulsion. Ireo fahasamihafana ireo dia misy ireo singa ampiasaina (mifangaro, ao anatin'izany ny singa samihafa ao amin'ny vahaolana), ny fomba emulsification, ary ny fepetra fanodinana bebe kokoa. Ny emulsion dia fanaparitahana ranon-javatra tsy mety maty roa na maromaro ....
Tranga an-tsokosoko amin'ny fanaparitahana alumina ultrasonika
Ny fanatsarana sy ny fanaparitahana ireo akora alumina dia manatsara ny kalitaon'ireo fitaovana Ato anatin'ny hetsiky ny ultrasound, dia lasa kely kokoa ny haben'ny fielezana fitambarana, lasa mitovy ny fizarana, ny fifandraisana eo amin'ny matrix sy ny dispersion dia mitombo, ary ny kompatib ...
mihoatra ny 60 heny ny fitomboan'ny fahombiazan'ny fampiasana ultrasound amin'ny faritra fitrandrahana
Ny tena fampiharana ny haitao ultrasonic amin'ny sehatry ny fanomanana fanafody nentim-paharazana sinoa dia ny fitrandrahana ultrasonic. Tranga marobe marobe no manaporofo fa ny teknolojia fitrandrahana ultrasonic dia afaka mampitombo ny fahombiazan'ny fitrandrahana in-60 farafahakeliny raha ampitahaina amin'ny teknolojia nentim-paharazana. Fr ...
Ny fanaparitahana ultrasonic dia fomba tsara hanaparitahana ireo singa nano
Ny vongan'i Nano dia manana haben'ny poti kely, angovo avo lenta ary manana fironana hihaona tampoka. Ny fisian'ny agglomeration dia hisy fiantraikany be amin'ny tombony amin'ny vovo-nano. Noho izany, ny fomba fanatsarana ny fanaparitahana sy ny fitoniana ny vovo-nano amin'ny mpanelanelana amin'ny rano dia tena manafatra ...
Ny marika JH anay dia nandany ny fampiharana
Hangzhou Precision Machines Co., Ltd. dia nifantoka tamin'ny sehatry ny fitsaboana rano simika nandritra ny folo taona mahery. Hatreto, ny fitaovanay dia teo amin'ny sehatry ny fitsaboana menaka CBD, fanomanana nano liposome, fanaparitahana graphene, fanaparitahana slurry, fanaparitahana alumina, fitrandrahana fanafody sinoa ...
Fa maninona no malaza amin'ny mpampiasa ny fitaovana fitrandrahana ultrasonic?
Ny fitaovana fitrandrahana ultrasonic dia manana fahombiazana amin'ny fitrandrahana avo, mari-pana ara-dalàna ary fitrandrahana tsindry, fanjifana angovo ambany, automatique avo lenta, ary manana ny toetra sy tombony izay tsy azon'ny fomba fitrandrahana mahazatra. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fanafody io, ...
Ny famokarana ny vokatra fampiharana indostrialy ultrasonic sy ny famolavolana ny vahaolana dia tena matihanina ary mitaky mpiasa manokana. Hangzhou Precision Machines Co., Ltd. dia nanolo-tena tamin'ny famolavolana fampiharana indostrialy ultrasonic, indrindra eo amin'ny sehatry ny fanaparitahana. Tamin'ny pr ...
Izay nolazain'ny mpanjifa
Ny haitao Ultrasonic dia manana fampiharana marobe, ny orinasanay Hangzhou Precision Machinary Co., Ltd. forcus amin'ny sonochemistry ultrasonic izay ao anatin'izany ny fitrandrahana ultrasonic, ny fanaparitahana, ny emulsification, ny homogenization, ny degassing sns Rehefa afaka 8 taona ny fanangonana angon-drakitra sy ny olana ka ...
fitaovana ultrasonic Canton Fair
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-05-16
Ny Fair Canton 2020 dia hatao ny 15 hatramin'ny 24 Jona mandritra ny 10 andro. Ny trano heva amin'ny Internet an'ny fitaovan'ny ultrasonika dia eo amin'ny fampiharana sy ny fandaminana ary hampandre anao ara-potoana ianao raha misy ny fandrosoana.